Fabián Marcel Gaete wuxuu ku abuuraa farshaxan yar ilbiriqsiyo gudahood | Abuurista khadka tooska ah
Soo ogow farshaxanka yar ee Fabián Marcel Gaete
Judit Murcia | | Fanaaniin
Ma taqaan farshaxan yar? Faahfaahin badan, farshaxanyahanku wuxuu sameeyaa farshaxan gaar ah, Fabian Marcel, ilaa yaraantiisii ​​ayuu lahaa jacaylka ranjiyeynta. Qoyskiisa oo dhami waxay ku dhaqmeen farshaxanka dhinacyadooda kala duwan. Fabian wuxuu raacay dhaqankan, wuxuu sii waday xiisihiisii ​​farshaxanka iyo rinjiyeynta ilaa uu ka helay shilka aad u culus oo ay ahayd hal sano oo aan lahayn xasaasiyad ama dhaqaaq.
Ka dib markii waxqabadka baxnaaninta Muddo sannad ka badan, oo uusan wax arki karin ama dhaqaaqi karin, ayuu diiradda saaray tababarka maskaxda. Markii la bogsaday, wuxuu kusii waday jacaylkiisa ranjiyeynta.
2 Waxay qaadataa 30 ilbiriqsi si loo sameeyo jir
3 Astaamaha pinto-kan
Fabian Marcel wuxuu ku dhashay Chile iyo wuxuu u wareegay Malaga sanado kahor. Ayaa hada ah farshaxan reer magaal ah. Rinji oo samee kanaga farahaaga ayuu ku shaqeeyaa. Waxaad ka heli kartaa adiga jidadka Malaga, guud ahaan wuxuu ku yaal duhurkii a geeska cathedral-ka.
Waxay qaadataa 30 ilbiriqsi si loo sameeyo jir
Feejignaanta Fabian ee sawir qaadista waa wax lala yaabo. Barnaamijka ee Duulis waxaa lagu casuumay inuu soo bandhigo hadiyadiisa. Daaran crystal awooday inuu waxqabad sameeyo, dhowr ilbidhiqsi, shaqo farshaxan oo cinwaankeedu yahay "Taabashada muuqaalka." Waxa ugu cajaa’ibka badan ayaa ah dabiiciga ah ee uu rinjiyeysto. Wuxuu awoodaa inuu sharaxo nuun kasta isla waqtiga uu sawirayo.
Dhammaan hadiyadiisii ​​farshaxanimo, wuxuu ku takhasusay dib-u-qurxiyo muuqaalka muuqaalka: buuraha, badda, qorrax ka soo baxa.
Ku rinji farahaaga, farahaaga. Saxiixiisa, oo uu ku daro dhammaan shaqooyinkiisa, waa shimbir duulaya. Leh heer faahfaahin cajiib ah, waxaanan kugula talinayaa inaad fiiriso nidaamka farshaxankiisa. Yaab!
Waa wax cajiib ah in la arko sida ay u egtahay, iyo sida ay tahay dib u eegista internetka, Dalxiisayaashii la yaabay firfircoonidiisa iyo farshaxankiisa, ayaa istaagay tiisa qiimo jaban. Sida laga soo xigtay dalxiis Ingiriis ah, wuu dacweeyay lix euros rinjiyeynta iyo toban euros by dos.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Soo ogow farshaxanka yar ee Fabián Marcel Gaete
Xagee laga iibsan karaa shaqooyinkan farshaxanka internetka? (Hadday suurogal tahay)
Pixels Cuntada waxaa qoray Yuni Yoshida
Waxay si cad kuugu ogolaaneysaa akhris nadiif ah oo aan mashquul ku aheyn Chrome